Bogagga Taariikhda: Sooyaalkii Ibraahin Meygaag Samatar iyo Qoraalladiisii – Qaybta 11aad - Somaliland Post
Home News Bogagga Taariikhda: Sooyaalkii Ibraahin Meygaag Samatar iyo Qoraalladiisii – Qaybta 11aad
Bogagga Taariikhda: Sooyaalkii Ibraahin Meygaag Samatar iyo Qoraalladiisii – Qaybta 11aad
Hadda ha illoobina, Ibraahin wuxu ka hadlayaa waa dimuqraaddiyaddii e’, waxaanu qoray: “Adduunyadan aynu ku nool nahay, dimuqraadiyaddu waxay ka mid tahay ereyada loogu fahmada daran yahay, loogu tarjumadda daran yahay, looguna adeegsiga daran yahay. Doc kale haddii aan ka eego, ereyadani ma aha qaar lagaga heshiiyay culuunta siyaasadda, sidaa darteed diyar uma ihi in aan halkan ku galo qeexid iyo macnayn aan waxba laga dheefayn. Bal se marka aad dhugato ee aad u dhabbo-gasho waayaha Somaliland ka taagan, waxa lama-huraan ah in dhowr arrimood la iftiimiyo ama wax laga yidhaahdaba.
Obocda iyo murtida dimuqraadiyaddu waa xukunka siyaasadeed oo saldhig looga dhigo dooca iyo dareenka la-xukumaha ama dadweynaha. Tani waxay ku iman kartaa qaabab badan oo kala duwan, oo qaabba qaabka kale ka fiican yahay ama door-roon yahayba. Siyaabo badan ayaa tijaabo loo geliyay hirgelinta ama adeegsiga dimuqraadiyadda intii ay soo taxneyd taariikhda aadamaha adduunyadan ku nool.
Innagu muslin ahaan waa aynu naqaannaa dimuqraadiyadda. Waxa la soo adeegsanayay tan iyo maalmihii uu islaamku ka tis-qaaday adduunyadan. Mabaadiida ma-guuraanka ahi waxay ku xardhan tahay Quraanka. Intiinna arrintan daahu ka saaran yahay, waxaan ka codsanayaa in ay akhriyaan Suuradda “Aala-Cimraan.”
Ma aamminsani in qaabka inoo degsan ee dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan iyo qof iyo hal cod, uu yahay wax xun oo la eedo ama dagaalaba. Waa uun mid ka mid ah qaababka dimuqraadiyadeed ee aadanuhu soo adeegsaday intii uu dhaqnaa ama soo jirayba. Waxbana kuma jabna haddii aynu hore u sii marinno oo sii qabyo-tirno.
Intaa haddii aan qaaday oo dhigay, anigu ma rumeysni in xisbiyada badani dawo u yihiin dhibaatooyinka iyo caqabadaha ina hor taagan dhammaantood. Waxaynu ku qasban nahay in aynu ku kabno dhaqankeenna iyo diinteenna. Haddii kale xisbiyadan aynu ka hadlaynaa waxay iska noqonayaan laf aan dhuux ku jirin ama geed xar galayba. Sidaa haddii ay wax u dhacaan xisbiyadan aynu ka hadlaynaa waxay gabbaad u noqonayaan qaab cusub oo keli-talisnimo oo xubnaha xisbiga lagaga hor joogsado in ay fursad u helaan ay waxa ay doonayaan ku doortaan.”
Aan ku soo xidho maansadan baroor-diiqda ah oo uu tiriyay Cabdiraxmaan Cawlo (Baqdaadi)
Waa lama huraan geeridiyo, hoyga aakhiro e’
Hayeeshee huq bay leedihiyo, hibasho gooniya e’
Hiirtaanyaday kugu dishaa, hadh iyo laylkiiye
Meygaag halyey buu ahaa, loo harraad qabaye
Alleylehe haldoor baa ka baxay, hanaddadeeniiye
Hakad baa Rashiidaw ku yimi, horumarkeeniiye
Suuganta hodanka ah murtida, heli-ogaanteeda
Hawraar odhaah iyo farshaxan, hoga-tusaalaynta
Kala haadintiisiyo naxwaha, kala hufnaantiisa
Garashada hoggeediyo sarbeeb, hadallo raac-raaca
Geesi loo han weynyuu ahaa, lama-huraankiiye
Hilaad iyo aqoon iyo wax-garad, hawlkar iyo daacad
Hufnaan iyo mudnaan iyo hab-dhaqan, geesi lagu hiisho
Iyo hoga tausaalaha gartiyo, guurti ma huraan ah
Geed hadhac ah oo la hadhsado, hiifka lagu reebo
Hayin dhaansha oo lagu nastoo, beel harraad-tire ah
Halka aad ka eegtaba gadh-qaad, libinta soo hooya
Geesi loo hanwen yuu ahaa, lama-huraankiiye
Hadday murugto oo aad dhib iyo, halis ka yaabayso
Ku-hagoogashada dhiilladiyo, nabad-heshiisiinta
Hal-karaanka isu soo hagiyo, hoy-isugu-geynta
Halgan run ah hayaan meel mariyo, heegan lagu seexdo
Higsad iyo olole hurinta iyo, haybad lagu guuro
Hammi lagu baraargu markay, hawl wax-qabad joogto
Hindisaha tilmaan iyo oddoros, himilo joog dheer leh
Hadal deeq leh isu-soo-hilaw, dhiirri hana-qaad ah
Hogol curatay harahoo biyo leh, waqal hereer joogo
Baaq hodan ah hirar kuu baxoo, lagu hayaamaayo
Kooshinoow hoggaan buu ahaa, heer u joogaba e’
Mar hadday hediisii gashoo, laga hor joogaynin
Alleylehe halbawlaa badh go’ay, loo hamuun qabye
Allaw hoyga aakhiro Jannada, hagar la’aan seexi
Inta NABIGA (SCW) meel la hadhsatiyo, Cali hareer jiifi
Eebow halaagiyo dhibtiyo, hoogga ka ilaali
Eebow adaa hodana oo, deeqda noo hura e’
Eebow haleelada Jannada, hoyga u ballaadhi
Codsi: Halkaa aan maanta inoogu joojiyo Taxanihii gaabnaa ee aan kaga hadlayay Ibraahin Meygaag Samatar. Waxaan jecelahay markanna in ay markiinnii noqoto oo aad idinkuna Ibraahin wax aan sidaa u sii badnayn ka tidhaahdaan. Waa codsi. Waxaan magan idiin ka ahay in aad waxoogaa ka soo qortaan Ibraahin Meygaag Samatar. Ma taqaannay? Ma maqashay? Qof caynkee ah ayuu ahaa? Wax saamayn ah miyuu kugu leeyahay ama lahaab? Weligaa ma la kulantay? Wax sawir ah ma ka haysaa? Wax sheeko ah ma la yeelatay oo ma kula wadaagi karnaa? Fadlan, aniguba in badan ayaan idin habay ee anigana markiinna bal bog, laba, saddex ama afarba iigu deeqa si aynu u qabyo-tirno sooyaalka taariikheed ee Ibraahin Meygaag Samatar oo aynu dibuhabayn dambe marar badan oo kale wadaagi doonno. Haddii aad wax soo qorayso oo aad soo dirayso fadlan soo raaci sawirkaaga iyo taariikhdaada oo kooban iyo halka aan ku noshahay.
Dhammaad, wa billahi towfiiq iyo qoraallo dambe oo intan ka shilis.